सरकारको निर्देशन : हतियारसहित भेटिए गोली हान्नु
सुरक्षा , राजनीति
काठमाडौँ । सरकारले चन्द समूहको गतिविधि माथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै प्रदेशभर सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । सरकारले हतियार बोकेर हिँडेको फेला पारे गोली हान्न निर्देशन दिएको छ ।
आन्तरिक विज्ञप्तिमार्फत आएको सूचनामा ‘हतियार सहित फेला परे तत्काल गोली हान्नु’ भनिएको छ । ‘चन्द समूहका कार्यकर्ता हतियारसहित हिँडेको फेला परे घुँडामुनि गोली हान्नेसम्मको निर्देशन छ,’ एक अधिकारीले भने ।
बिना हतियार हिँडेको तर नेतृत्वमा रहेको कार्यकर्तालाई जहाँ भेटे पनि पक्राउ गर्न र सामान्य कार्यकर्ता माथि पनि उच्च निगरानी राख्न निर्देशन छ । सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नो ज्यान, हतियार, कार्यालय, युनिटको सुरक्षा रणनीतिसहित सतर्क रहन भनिएको छ ।
एक डीएसपीका अनुसार हरेक जिल्लाका दुर्गम क्षेक्रमा सुरक्षा जनशत्ति बढाउने, गस्ती जारी राख्ने र विकास एवं सञ्चार संरचनाको सुरक्षामा विशेष सतर्कता राख्न निर्देशन छ । सामान्य कार्यकर्तालाई पनि पिछा गर्ने, बासस्थान निगरानी गर्ने र एक जिल्लादेखि अर्को छिर्ने सवारीमा समेत जाँच कडा पार्ने निर्देशन छ ।
स्रोतका अनुसार चन्द समूहका नेता–कार्यकर्तालाई पछ्याउने, तर्साउने र मनोवैज्ञानिक दबाबमार्फत वार्तामा ल्याउने सरकारको रणनीति पनि रहेकाले त्यसैअनुसारका गतिविधि गर्ने सुरक्षा निकायको आन्तरिक सर्कुलर छ ।
आन्तरिक सर्कुलरमा प्रहरीलाई एक जना मात्र बाहिर नहिँड्न, लामो गस्ती समूहमा हिँड्न, आफू जोगिएर फायर खोल्न भनिएको एक प्रहरी अधिकृतले बताए । प्रहरीका दुर्गमका सुरक्षा युनिटमा जनशक्ति बढाउनेदेखि आवश्यक परे सशस्त्र प्रहरीसँग पनि सहकार्य गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन छ ।
रूपन्देहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मराज भण्डारीले ग्रामीण क्षेत्रका सुरक्षा युनिटलाई पनि आफैंमाथि हुन सक्ने आक्रमणका लागि तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन गरिएको बताए । ‘सबै निर्देशन र रणनीति तय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले रातो बत्ती बालिसकेका छौं ।’
चन्द समूहका जिल्लास्थित सबै पार्टी कार्यालय, निवास एवं बासस्थान खाली भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ । चन्द समूहविरुद्ध प्रहरीले प्रदेशभरि विभिन्न खालका अपरेसन सञ्चालन गर्न थालेको प्रदेश ५ प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पीताम्बर अधिकारीले बताए ।
तपाईंमा कुनै बिमारी त छैन ? जिब्रोमा चम्चा राखेर १ मिनेट मैं पत्ता लगाउनुस्
गर्भवती हुनुहुन्छ ? यसरी थाहा पाउनुहोस् गर्भमा जुम्ल्याहा बच्चा भए नभएको
स्थानीय तहले खर्च गर्न सकेनन् साढे २८ अर्ब अनुदान
धनगढी उपमहानगरको पूँजिगत खर्च २६ प्रतिशत मात्रै
आज सोमबार, भगवान शिवजीलाई प्रशन्न गर्न यस्तो गर्नुहोस्
‘सारेगमप’मा प्रितमले मच्चाए धमका, सलमानले गरे प्रसंशा , क्याट्रीनाले उठेरै गरिन् तारिफ